အိမ်လွမ်းသူ: 07/01/2009 - 08/01/2009
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 11:28 PM0comments
အလည်လာကြသူတွေကို ပြန်လည်နှုတ်မဆက်နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်.. အခုတလော အလုပ်က မနက်ပိုင်းဖြစ်သွားလို့ စောစောအိပ်ပြီး စောစောထနေရတာနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ လေးကိုတောင် မဖွင့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်ကအပြန် ကလေးတွေက ၁၀ ရက် ကြာသင်ကြားပေးမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းမှာ camp ဝင်နေကြလို့ သူတို့ဆီကိုလည်း သွားနေရသေးတယ်လေ။ စာတွေလည်းမတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ မြန်မာ့ဆေးပညာ ဆောင်းပါးမှ အမျိုးသမီးတွေသားဖွားလျှင် အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်းပါးတပုဒ် တင်ပေးနိုင်ဖုိ့ စာရိုက်နေပါသေးတယ်။ မကြာခင်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အလည်လာကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 8:16 AM2comments
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ပေါ့လန်းမြို့တွင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များ...
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 1:19 AM 1 comments
ဒီနေ့သွားနာခဲ့ရတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားတွေကို နောက်တနေ့ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတင်ပေးပါမယ်.. လောလောဆယ်တော့ ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးလေး တင်ပေးထားပါတယ်နော်...
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 11:32 PM 1 comments
အိမ်လွမ်းသူရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် ကျေးဇူးရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားခဲ့သော ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးပစ်မှားလျှင်သင့်တတ်သည့်ဒဏ်ဆယ်ပါး စာမူကိုဖတ်ဖြစ်စေရန် တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ လာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်မိစေဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်..။ ကြွရောက်လာသူတိုင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကြည်လင်အေးချမ်း မေတ္တာဓာတ်လွှမ်းနိုင်ကြပါစေ
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 11:44 AM 1 comments
သီလရှင်လေးတွေတော့ လူထွက်ပြီး ပြန်လာကြပါပြီ။ သမီးကြီးရဲ့ သီလရှင်ဘွဲ့က ကေတုမာလာ၊ သမီးငယ်ကတော့ ဝဏ္ဏသိင်္ဂီတဲ့၊ အတူဝတ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးက ထေရစာရီတဲ့ …. ဥပေဇ္ဈာယ်ဆရာတော်ကတော့ မိုညှင်းသိင်္ဂီကျောင်းတိုက်က ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ မိုးကုတ်ဓမ္မကထိကဖြစ်ပြီး ၅ ရက်တရားစခန်းမှာ တရားလာပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာလေးတွေက ဒီတရားစခန်းမှာ ဝတ်ဖြစ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်လွမ်းသူကလည်း ဆရာလေးတွေနဲ့အတူ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်လို့ လူ့ဘဝမှာ ချမ်းသာစွားနေထိုင်နည်းတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကို ဥပမာတွေပေး၍ ရှင်းလင်းစွာ ဟောကြားပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေဟာ ဖြစ်စေဆိုတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်တရားမဟုတ်ပါဘူး။ သတ္တဝါတွေအတွက် လမ်းကောင်း၊ လမ်းဆိုးကို ညွှန်ကြားပြသပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် နာယူမှတ်သား ကျင့်ကြံနိုင်မှ မိမိရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကိုပိုင်းလော့ဆရာတော်လို့လည်း ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် တရားတော်နဲ့ လမ်းပြပေးတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်တွေကို နာယူကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အိမ်လွမ်းသူရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လူ့ဘဝမှာ ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ…….
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 10:35 PM3comments
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ပေါ့လန်းမြို့တွင် သီတဂူဆရာတော်ဘု...